Amai vaFrankenstein, iyo nyaya yefilicide | Zvazvino Zvinyorwa
Amai vaFrankenstein inhoroondo yenhoroondo yaAlmudena Grandes uye chikamu chechishanu chedungwe Zvikamu zveHondo Isingaperi. Iri zita rinopa nhoroondo yakaiswa mumashure mehondo Spain. Saizvozvowo, dingindira rebhuku rinoratidza chikamu chemhedzisiro yepfungwa inokonzerwa neHondo yeVanhu nehutongi hwaFranco.
Kune izvi, munyori anopa mazana evatambi - vamwe vekunyepedzera, vamwe chaivo - pakati penyaya yezvakaitika panguva iyoyo. Ikoko, rangano rinotenderera makore ekupedzisira ehupenyu hwaAurora Rodríguez Carballeira, uyo anoratidzika kunge akavharirwa muhupoteri. Pamusoro pe, iro bhuku rinofumura zvakavimbika zviitiko zveuyu mukadzi wechiSpanish uyo akazove nemukurumbira muma30 nekuuraya mwanasikana wake.
1 Amai vaFrankenstein
1.1 Context yebasa
1.2.1 Kutanga nzira
1.2.4 Mukadzi wechidiki anoshamisa
1.2.6 Nyaya isingabviri yerudo
1.2.7 Mavara chaiwo
1.2.8 Dzimwe nhengo dzenyaya
2.1 Zvinyorwa zvemitambo
2.1.1 Zvikamu zvehondo isingaperi
Vakuru vakasangana nenyaya yaAurora Rodríguez Carballeira mushure mekuverenga Chinyorwa chakawanikwa muCiempozuelos (1989), naGuillermo Rendueles. Kushamiswa neuyu hunhu, iyo Munyori weMadrid akaenderera mberi nekuferefeta kuti anyorwe zvakadzama nezve nyaya iyi. Nechikonzero ichi, mukati mese nyaya yakapihwa zviitiko zvinoitika zvinoverengeka, izvo zvinopa nyaya yacho kukura.
Iko kusimudzira kunoisa muverengi muCiempozuelos Asylum (padyo neMadrid), mukati ma1950s. Chinyorwa ichi chinofukidza mazana mashanu nemakumi matanhatu emapeji akazara nenhoroondo dzinotsanangura zvinokunda kubva muhondo dzakawanda kudaro. Nenzira iyi, zano rinowanikwa rakatenderedza mavara matatu: Aurora, María neGerman, vanoshandura munhu wekutanga murondedzero.
Uye 1954, chiremba wepfungwa wechiGerman Velásquez anodzokera kuSpain kunoshanda muhupoteri hwevakadzi muCiempozuelos, mushure mekugara makore gumi nemashanu muSwitzerland. Nekuda kwekushandisa kwekurapa kutsva neklorpromazine - neuroleptic inoshandiswa kudzikisira mhedzisiro yeschizophrenia - inoshoropodzwa zvakanyanya mukati mepfungwa. Zvisinei, mhedzisiro yacho inokatyamadza munhu wese.
German anokurumidza kuona kuti mumwe wevarwere vake ndiAurora Rodríguez Carballeira, mukadzi akagadzira kuda kuziva kubva paudiki. Semwana mudiki, anoyeuka achinzwa kureurura kwaakaita kuna baba vake - Dr. Velásquez - nezve iyo kuuraya mwanasikana wake. Nekudaro, chiremba wepfungwa anopinda mune iyo kesi kuti awane kurapa kwakanyanya uye kuyedza kuita mazuva ake ekupedzisira ave nani.
Aurora Rodríguez Carballeira mukadzi akasurukirwa zvakanyanya, anongoshanyirwa naMaría Castejón, mukoti anga agara ipapo (ndiye muzukuru wemugadheni). María anonzwa kukoshesa kukuru Aurora, nekuti ini ndakamudzidzisa kuverenga nekunyora. Pamusoro pezvo, mazuva ese anofarira kuenda kukamuri yake, uko kwaakazvipira kumuverengera, sezvo Rodríguez ave bofu.
Aurora Ane chimiro chemukadzi akangwara kwazvo, mudziviriri weeugenics uye kodzero dzevakadzi. Her anorwara nechirwere chinokonzeresa kuona zvisizvo, kutambudza manias uye kunyepedzera kwekubwinya. Iyo nyaya inotaura nezve ake maviri ekupedzisira makore ehupenyu, mushure memakumi maviri emakore ejeri nekuda kwemhosva yaakapara kumwanasikana wake, iyo yaasina kumbozvidemba.
Akatsunga kuumba "mukadzi akakwana wenguva yemberi", Aurora akatanga kuve nemwanasikana uye kumurera aine zvinangwa zvake zvikuru. Mukadzi uyu akadana musikana uya: Hildegart Rodríguez Carballeira - kwaari kwaive chirongwa chesainzi. Pasi pemutemo iwoyo, akarera mwana prodigy, aine budiriro huru musimboti. Asi, Chishuvo chemukadzi wechidiki cherusununguko uye kuda kubva kuna amai vake chakatungamira un kuguma kunosuruvarisa.
Mukadzi wechidiki anoshamisa
Hildegard Aive akangwara zvakanyanya, nemakore matatu chete aitoziva kuverenga nekunyora. Zvanga zviri gweta gotwe akapedza kudzidza kuSpain, ndichiri kudzidza mamwe mabasa maviri: Mishonga uye Philosophy uye Tsamba. Pamusoro pezvo, aive mumiriri wezvematongerwo enyika achiri mudiki, saka, aive neramangwana rakanaka ... Akaderedzwa apo akapondwa naamai vake, aine makore gumi nemasere chete.
En Amai vaFrankenstein, munyori anotsvaga kuratidza chokwadi chevakadzi venguva iyoyo. Neichi chikonzero, Grandes vanoshandisa iyo Ciempozuelos yepfungwa sanatorium yevakadzi seyakagadzika. Sezvo hupoteri uhwu hwaisangoitirwa vakadzi vane matambudziko epfungwa, paivewo nevakadzi vakasungwa nekuda kwekuzvimiririra kana kurarama pabonde vakasununguka.
Nyaya isingabviri yerudo
Paunosvika kuCiempozuelos, ChiGerman chakakwezvwa naMaría, mukadzi wechidiki akadzvinyirirwa uye akashungurudzika. Iye, kune rake divi, anomuramba, chimwe chinhu chinotemesa musoro chiGerman, uyo achafanirwa kuona kuti nei akasurukirwa uye asinganzwisisike. Rudo rwakarambidzwa nekuda kwemamiriro ezvinhu epasi anotonga zvakapetwa kaviri, izere nemitemo isina musoro uye kusarongeka kwese kwese
Iyo rondedzero inosanganisira vatambi vanoverengeka vechokwadi venguva, senge, semuenzaniso, Antonio Vallejo Nájera naJuan José López Ibor. Antonio aive director weCiempozuelos, murume aidavira eugenics uye ndiani akatenda kuti maMarxist ese anofanira kubviswa. Saizvozvo, akasimudzira vanhu vakuru vakapfura nepfungwa iyoyo uye nekuendesa vana vavo kumhuri dzeNational Movement.
Kune rumwe rutivi, López Ibor - kunyangwe asina hushamwari naVallejo - akabvuma kuti akabata zvisina kunaka izvo zvinonzi "vatsvuku" uye ngochani. Uyu aive chiremba wezvepfungwa munguva dzaFranco, aidzidzira zvikamu zvemagetsi nemagetsi. Maitiro aya aingoiswa kuvarume chete, sezvo vakadzi vaisagona kuzvimiririra pabonde.
Dzimwe nhengo dzenyaya
Muchirongwa munowoneka vatambi vechipiri (vengano) vanobatsira kupedzisa nyaya. Pakati pavo, Baba Armenteros nemasisita Belén naAnselma, vanomiririra chinamato mukati meutiziro. Uye zvakare, Eduardo Méndez, chiremba wepfungwa weungochani, uyo akabatwa muhudiki hwake nemaitiro aLópez Ibor uye anova shamwari yakanaka yeGerman neMaría.
Almudena Grandes Hernández akaberekerwa muMadrid musi waMay 7, 1960. Akapedza zvidzidzo zvake zvehunyanzvi kuComplutense University yeMadrid, kwaakapedza kudzidza muJogirafi uye Nhoroondo. Basa rake rekutanga raive kuimba yekutsikisa; Ikoko basa rake guru raive rekunyora iwo mavara ezasi emifananidzo mumabhuku ekuverenga. Iri basa rakamubatsira kuti azive nekunyora.
Quote nemunyori Almudena Grandes.
Bhuku rake rekutanga, Makore aLulu (1989), yaive budiriro huru: yakashandurwa mumitauro inopfuura makumi maviri, akahwina muXI La Sonrisa Vertical Award uye akajairwa kune iyo cinema. Kubva ipapo, munyori akaita zvinyorwa zvinoverengeka zvakawana nhamba dzakanaka dzekunyora pamwe nekurumbidzwa kwakanyanya. Muchokwadi, iwo ataurwa pazasi akaendeswawo kumabhaisikopo:
Malena izita rekuti tango (1994)
Atlas yeVanhu Geography (1998)
ari mhepo yakaoma (2002)
Zvikamu de una hondo zvisingaperi
Uye 2010, Huru yakabudiswa Agnes uye mufaro, chikamu chekutanga cheiyo akateedzana Zvikamu zvehondo isingaperi. Nebhuku rino, munyori akahwina iyo Elena Poniatowska Ibero-American Novel Prize (2011), pakati pemimwe mibairo. Parizvino pane mishanu mabasa anoumba saga; wechina: Varwere vaDr García, akagamuchira iyo 2018 National Narrative Award.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Amai vaFrankenstein
Sergio Ribeiro Pontet akadaro
Melena izita tango (1994), hazvina kunaka. Zita chairo rinoti "Malena" uye kwete Melena. Zvakare, zita rekuti tango rinotaurwa nezvaro nderechokwadi », Malena; uye kwete Melena.
Pindura Sergio Ribeiro Pontet
Nhau dzaMay. Kusarudzwa kweye nhema nhema, kufamba uye komiki